DEG DEG:- Dagaal la isku jilbo dhigtay oo haatan ka socda deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dagaal la isku jilbo dhigtay oo haatan ka socda deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay
Warar goordhaw nasoo gaaray ayaa sheegaya in deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay uu haatan ka soconaayo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaaya kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-shabaab .
Dagaalkaas oo soo bilawday gelinkii dambe ee xalay ayaa yimid ka dib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar culus ku soo qaadeen fariisimo ay deegaanka Goof-gaduud ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Labada dhinac ayaa la sheegayaa inay dagaalkaasi isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana qeybo badan oo ka mid ah deegaankaasi maanta laga maqlayaa rasaasta iyo madaafiicda ay labada dhinac is dhaafsanayaan.
Warar hordhac ah oo aynu ka heleyno qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaa sheegayaa inay gaareyso dhimashada 10 qof oo labada dhinac ah, iyo tiro dhaawac ah oo intaasi ka badan.
Dadka ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa waxa la geeyay isbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaasi dhaawacooda lagula tacaalayo.
Xiriiro kala duwan oo aynu isku daynay inaynu la sameeyno saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa inoo suurto galin, waxaase weli adag in la ogaado faah-faahin dagaalkaas.
Sidoo kale, ma jiro war hadal ah oo kasoo kala baxay saraakiisha labada dhinac oo ay uga hadlayaan dagaalka weli ka soconaya deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay.